ဘရာမဝတ်ပဲ ပင်လယ်ကြီး နဲ့ အတူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက် တဲ့ စစ်ပိုးအိမ် – Let Pan Daily
ဘရာမဝတ်ပဲ ပင်လယ်ကြီး နဲ့ အတူ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက် တဲ့ စစ်ပိုးအိမ်
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စစ်ပိုးအိမ်ကတော့ ဆက်စီ ကျကျ အလှတရားတွေရယ် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေပန်းစား လာခဲ့ တဲ့ သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေစစတွေ့ချင်းမှာ မိန်းကလေးအစစ်တစ်ယောက်လား လို့တောင် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးရဲ့ ဆက်ဆီကျလွန်းတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် အလှတရားတွေကလည်း မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ fb လူမှုကွန်ယက်မှာလည်း သူမရဲ့အမိုက်စားပုံများကိုတင်လေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်.
သူမရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကိုလည်း ဖေ့ဘွ တ်ပေါ်တွင် မကြာခဏဖော်ပြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်လည်း ပိုးကို ဆက်လက်အားပေး လိုက်ပါအုံးနော်။ ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like & share လေး လုပ်ပေးသွား ပါအုံးနော် . ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ..
Source:Sitt Poe Eain
ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ ရခိုင္တိုင္းရင္းသူေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ စစ္ပိုးအိမ္ကေတာ့ ဆက္စီ က်က် အလွတရားေတြရယ္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့အၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ ေရပန္းစား လာခဲ့ တဲ့ သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြစစေတြ႕ခ်င္းမွာ မိန္းကေလးအစစ္တစ္ေယာက္လား လို႔ေတာင္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ခဲ့ရတဲ့သူေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုးရဲ႕ ဆက္ဆီက်လြန္းတဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ အလွတရားေတြကလည္း ျမင္သူတိုင္း ေငးေလာက္ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူဖမ္းစားေနတာအမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ fb လူမႈကြန္ယက္မွာလည္း သူမရဲ႕အမိုက္စားပုံမ်ားကိုတင္ေလ့ရွိသူျဖစ္ပါတယ္.
သူမရဲ႕အမိုက္စားပုံရိပ္ေတြကိုလည္း ေဖ့ဘြ တ္ေပၚတြင္ မၾကာခဏေဖာ္ျပတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ခ်စ္ပရိသတ္လည္း ပိုးကို ဆက္လက္အားေပး လိုက္ပါအုံးေနာ္။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ like & share ေလး လုပ္ေပးသြား ပါအုံးေနာ္ . ခ်စ္ပရိတ္သတ္ႀကီးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္. ..
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကျာပေါက်သမီး နဲ့ နီနီခင်ဇော် တို့ရဲ့ The Voice စင်မြင့်ပေါ်က အဖြစ်အပျက်လေး ….